समाजिक संजालको दुरुपयोगले आतंकीत बनेको समाज
Friday, 30 Aug, 2019 5:36 PM
टोल, गल्ली दुर्गन्धित वहाल जताततै बहुला कुकुरहरुको विगविगी वढेको छ । बाटो हिडने पैदलयात्रीहरु, नातागोता भेटन गएका आफन्तहरु बौलाहा कुकुरको टोकाइमा परेका छन । आज फलानो टोलमा वौलाहा कुकुरले यतिजना लाई टोक्यो, भन्ने समाचार आएको आयै छ । नजिकका छरछिमेकमा बस्नेहरुलाई टोकेको खण्डमा उसको नाम नै लिएर चियापसल, डवलीहरु क्यारेमवोर्ड र स्नोकर खेल्ने पूलहाउसमा बौलाहा कुकुरले आफ्नो टोलमा मच्चाएको आतङ्कबारे चर्चा हुन्छ । नगरपालिका, महानगरपालिकाहरुले बौलाहा कुकुर नियन्त्रण गर्न कुनै कदम नचालेकोमा पनि युवाहरु बीच असन्तोषका कुरा चल्दछन् ।
बौलाहा कुकुरहरुको टोकाइ बढ्दै गएपछि जिल्लाका धेरै स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा रेविज विरुद्धको औषधी मूलो नै सकिएको खबर पनि फैलिसकेको हुन्छ । त्यसले सर्वसाधारण टोलेहरु थप चिन्तित छन् । आजसम्म त बौलाहा कुकुरको टोकाइमा परिएको छैन् । अब टोकी हाल्यो भने के गर्ने होला ? कसो गर्ने होला ? यसको औषधी पनि अस्पतालमा सकिएको खबरले जनमानसमा अझ छटपटी वढाएको छ ।
यस्तै यस्तै मनस्थितिमा टोलका मान्छेहरु आक्रान्त बनेर बसेका छन् । कुकुरहरु किन बौलाउँछन् ? तिनले चिने नचिने जसलाई पायो त्यसलाई किन टोक्न झम्टन्छन् । त्यसको वैज्ञानिक कारण भने गाँउ टोल सहर वहालमा बस्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । त्यो थाहा पाएर पनि तिनिहरुको सन्त्रासमा कमी आउने भन्ने होइन । बौलाहा कुकुरले टोकेमा “रेविज” हुन्छ भन्ने कुरा भने धेरैलाई थाहा भईसकेको छ ।
सामान्य नबौलाएको कुकुरले टोक्दा दुखाइ मात्र सहनु पर्दछ । यो पनि कम पीडाजनक त हुदैन । तर बौलाहा कुकुरले टोक्दा त के कुरा, चिथर्दा समेत पनि दुखाइ भन्दा पनि “रेविज” हुने डरले मानिसहरु भयभीत बन्ने गर्दछन । धेरै मानिसहरुलाई थाहा छ “रेविज” रोग लागेपछि त्यसको उपचार छैन । रेविजलाई शरीरमा फैलन नदिने पूर्व तयारी मात्र त्यसको एकमात्र उपचार हो ।
रेविज रोग शरीरमा फैलिएपछि त्यस रोगको उपचार अहिलेसम्म विज्ञानले बनाउन सकेको छैन । बौलाहा कुकुरको विगविगीले गाँउ सहर टोल र बजारमा फैलाएको भय र त्यसबाट जनमानसमा छाएको आक्रान्तको कारण नै यही उपचार विहिनतामा मर्नु पर्ने भएर हुन सक्दछ । हिजो आज बौलाहा कुकुरले फैलाएको भन्दा चर्को आतङ्क सामाजिक सूचना सन्जालका बौलाहाहरुले फैलाएका छन् ।
जनमानसलाई यसरी आक्रान्त र भयभीत बनाउने “रेविज” को मात्रा कुकुर आफै भित्र जन्मजात रहेको हुन्छ र त्यो रेविज बढ्दै गएपछि बौलाउँछ भनिन्छ ? तर सामाजिक सूचना सञ्जालका बौलाहा के कारण बौलाउछन् भन्ने कुरा भने अहिलेसम्म कसैले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन् । कतै तिनमा पनि कुकुरमा जस्तै जन्मजात “रेविज” त छैन ? राम्रोसंग जाँच गर्न आवश्यक छ । विज्ञहरुका अनुसार कुकुर जस्ता जनावरहरुमा “रेविज” को आवश्यक मात्रा जन्मजात नै रहेको हुन्छ । त्यो मात्रा आवश्यक भन्दा बढता भएपछि कुकुर बौलाउने गर्दछ । “रेविज” को मात्रा वढि भएर बौलाहा बन्न पुगेको कुकुर त्यसको मात्रा थप बढ्दै गएपछि बौलाहा भएकै अवस्थामा मर्दछ । त्यसैले कुकुर बौलाएको हो होइन भन्ने एकिन गर्न त्यस्ले मानिसलाई टोकेपछि त्यो टोक्ने कुकुर म¥यो मरेन भनि त्यसको पिछा पनि गर्ने गरिन्छ ।
यसरी समाजलाई आक्रान्त बनाउने बौलाहा कुकुरको आतङ्क जस्तै हिजोआज अर्को एउटा बौलाहा जनावरले सबैलाई आक्रान्त बनाएको छ । त्यो आक्रान्त बनाउने बौलाहापन भनेको फेसबुक वाल, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सूचना, सञ्जालहरुमा जथाभावी लेख्ने बौलाहाहरुले समाजमा मचाएको आतङ्क हो ।
मानिसको मान मर्यादा उसको व्यक्तित्व, स्वतन्त्रता, नीजी जीवनको गोप्यता कुनै कुरालाई पटक्कै वास्ता नगरेर बौलाहा कुकुरले जथाभावी टोके जस्तै पारामा सामाजिक सञ्जालमा अन्तर्र्गल झूठा कुरा पोस्ट गर्ने र त्यसलाई शेयर गर्ने एउटा नयाँ रोग समाजमा व्याप्त छ । यो रेविजको समयमै उपचार गरिएन भने बौलाहा कुकुरको टोकाईबाट मानिस भित्र प्रवेश गरेको रेविज असाध्य भएर मृत्युवरण गरेकै तहमा समाज भोली उठ्न नसक्ने गरि अनुसाशनहीन बन्ने खतरा छ ।
यसरी सामाजिक रेविज फैलाउने बौलाहा कुकहरुलाई कुनै निकायले त नियन्त्रण गर्नु पर्ने हो । समाजका बौद्धिक भनिनेहरु आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्न रुचाउनेहरु राष्ट्रिय सांस्कृतिक, कला र परम्परा एंवम सामाजिक मर्यादा अच्छुंण राख्नु पर्दछ भनी रातो दिन अर्ति उपदेशका प्रवचन दिने धर्म गुरुहरुले त यस बौलाहाहरुको आतङ्क विरुद्ध केही भन्नु पर्ने हो । तर कोही अनदेखा गरेर बस्ने, कोही आफ्नो छोराछोरी मरेका छैनन, छिमेकीको छोराछोरी मरे मरुन भने जस्तै व्यवहार देखाउने काम भएको छ ।
तर वौद्धिक सचेत वर्गले बुझ्नु पर्ने हो कि आफ्नो घर, आगँन, कोठा, चोटा मात्र सफा राख्दैमा यदि सडक गल्ली फोहोर भएको खण्डमा लामखुट्टे हराउदैन भने जस्तै समाजमा नकारात्मकता मात्र बढेमा कसैको पनि भलाई हुदैन । सडक, चोक, गल्ली, फोहोर भएको अवस्थामा सफा घर, चोटा कोठामा पनि भाइरस फैलने डर सदासर्वदा रहन्छ नै ।
सामाजिक सञ्जालहरुमा पढनेै नसकिने गरि व्यक्तिका मानमर्यादा माथि आक्रमण हुने क्रम बौलाहा कुकुरको सन्त्रास भन्दा पनि भयानक रुपमा बढेको बढैछ । यो रेविजलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा हाम्रो समाज पूर्णत रेविजमय बन्ने खतरा छ । त्यो रेविजमय बनेको समाजमा बस्ने हामी जो कोही पनि त्यस रेविजको खतराबाट मुक्त हुन सक्दैनौ । पानी, हावा, र वातावरण प्रदुषण हुदाँ त्यसले एकाघरलाई मात्र प्रभावित बनाएको हो भन्ने मान्यता राखेर बस्ने हो भने त्यो गलत हुनेछ ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालका बौलाहा कुकुरहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्ने एउटा बलियो निकायको खोजी गर्नु पर्छ कि ?
तर कुकुर बौलाहा हुने कारण विज्ञहरुले थाहा पाए जस्तै यी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको उत्रेका बौलाहाहरु किन बौलाउने गर्दछन भन्ने कुरा थाहा पाउन सके हुन्छ । यसको सामाजिक मनो चिकित्सकहरुले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो कि ?
होइन भने बौलाहा कुकुरले जथाभावी वटुवा टोक्दै हिडेकै शैली बानी व्यवहारमा मानिसले जीवन भरि कष्टसाथ बनाएको गरिमा, इज्जत र प्रतिष्ठालाई धमिलो बनाउने अत्यन्त निकृष्ट हरकत तिनले किन गर्दछन् ? के पाउने गर्दछन् ? किन परपीडामा ती रमाउँछन् फोहोरमा किरा रमाए जस्तै ? यो पनि रेविज रोगको जस्तै बेलैमा उपचार नगर्ने हो भने भोली समाजलाई यसले धमिलो बनाउन बेर छैन ।